Iidolophu zonxweme lwase-Asturiya ekufuneka uye kuzo | IBezzia
Iidolophu zonxweme lwaseAsturiya ekufuneka uye kuzo
UMaria vazquez | 21/07/2021 10:00 | Uhambo
I-Asturias yenye yeendawo zethu esizithandayo. Kwaye kunjalo ukongeza ekubeni ezinye zeedolophu ezintle eSpain, e-Asturias ungonwabela imozulu entle kakhulu ehlotyeni. Kungenxa yoko le nto namhlanje siphakamisa iidolophu kunxweme lwase-Asturian esikholelwa ukuba awuphoswa.
Kule nxalenye yokuqala siza kuhamba unxweme phakathi kweGijon kunye nomda neGalicia. IAvilés, iCudillero kunye neLuarca ibe ngabantu abathathu abanyuliweyo. Bonke bayakumema ukuba ulahleke ezitalatweni zayo, uhambe uphinde ubuyele, ukuze ungaphoswa nayiphina iikona zayo.
1.1 Iindawo ongenakuphulukana nazo kwiZiko leMbali
Isixeko saseAvilés yindawo yethu yokuqala yokumisa. Isixeko esakhiwe kunxweme lomlambo iAvilés, ezimbalwa nje I-30 km ukusuka eGijon, uyasinika enye yeeminqwazi zembali ezintle esinokuyifumana kwiAsturias. Wabhengeza indawo yeMbali-yobugcisa ngo-1955, ukulahleka ezitalatweni kuyeyona ndlela yokuyifumana, nangona imephu ingonzakalisi.
Iindawo ongenakuphulukana nazo kwiZiko leMbali
Ummelwane weSabugo, eyaziwa njengendawo yokuhlala oomatiloshe, yenye yezona ndawo zintle kweli ziko lembali.
La Plaza de los Hermanos Orbón, apho ikhoyo iMarike yaseLas Aceñas, eyakhiwe ngenkulungwane ye-XNUMX.
La Icawa yamaRoma ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX yooFata baseFranciscan ababekwe ePlaza Carlos Lobo, phambi kweMyuziyam yeMbali yeDolophu. Lingcwaba likaPedro Menéndez, inkqubela phambili yaseFlorida, umatiloshe kunye nomseki wesona sixeko sidala eUnited States, iSt. Augustine waseFlorida.
La Plaza de España okanye iPatch Kunye nezitalato ezingqongileyo: Ferrería, Cámara okanye Rivero
La IPlaza de Domingo Álvarez Acebal, apho ziphakathi kwezinye ii-facade ezintle ezo zeBalsaera Palace kunye neCawa yaseSan Nicolás de Bari.
Isitalato iGaliana, Isitalato esiziimitha ezingama-252 kuphela esakhiwe ngenkulungwane yeshumi elinesixhenxe ngexesha lolwandiso lweBaroque lwesixeko. Esona sitrato side saxhaswa e-Avilés kwaye inye kuphela enepavumente ephindwe kabini: enye yenzelwe ukuhamba kweenkomo kwaye enye yenziwe ngethayile yabemi.
Ipaki yeFerrera, Ipaki yasesitayeleni ngoku esidlangalaleni eyathi kangangeenkulungwane iMarquis yayinolonwabo lwabo ngasemva kweFerrera Palace.
Ukongeza, unokufumana umdla ukutyelela Amangcwaba kaMasipala waseLa Carriona, indawo enembali ebalulekileyo kunye nobugcisa obuyinxalenye ye-ASCE (Umbutho weeCementery eziBalulekileyo eYurophu). Ewe kunjalo Iziko laseNiemeyer, Iziko lenkcubeko eliyilwe ngumzobi weBrazil odumileyo u-Óscar Niemeyer kwaye ubekwe embindini weli chweba.
Idolophana encinci yokuloba yaseCudillero, Ubhengeze iZiko lobuGcisa, Iyabonakala ngokuhlelwa kwayo ngohlobo lwe-amphitheatre kunye nemibala evuyayo yezindlu zayo. Izizathu zokuba kutheni kufanelekile ukutyelelwa kunye nokulahleka phakathi kwezitalato zethambeka kunye neendlela.
Ukuqhutywa yindlela efanelekileyo yokufumana idolophu kunye nezinye zeembono ezilungileyo zebheyi. Emva koko kuyacetyiswa ukuba uhambe ngakwindlela ehamba phambili edibanisa izibuko kunye Indlu yesibane yeCudillero, eyakhelwe ngo-1858 nalapho zifunyanwa khona iimbono ezintle zepanoramic.
Kusondele kakhulu eCudillero ndiyakukhuthaza ukuba undwendwele nawe IQuinta de Selgas, iseti yebhotwe kunye nepropathi ebunjiweyo ye-900000 m2 eyakhiwe phakathi kwe-1880 kunye ne-1895 kwilinge labazalwana u-Ezequiel noFortunato de Selgas Albuerne. Ibhotwe ligcina umhombiso walo wokuqala ungaphambuki, kwaye izindlu zipeyintwe ziinkosi ezinkulu ezinje ngeGoya, El Greco, Luca Giordano, Corrado Giaquinto kunye neVicente Carducho. Izitiya, ngokwenxalenye yazo, ziyatshintsha phakathi kwesitayile sejiyometri yesiFrentshi senkulungwane ye-XNUMX kunye nesimbo sothando okanye esithandekayo esiye saba yimfashini e-United Kingdom ngekhulu le-XNUMX.
Izibuko laseLuarca yindawo ye-photogenic kwaye yenye yeedolophu ezikunxweme lwe-Asturian ekufuneka uyindwendwele. Ikwabizwa ngokuba yiWhite Villa, njengoko lo ingumbala obalaseleyo ezindlwini zabo, ifihla iindawo ezininzi ezilindele ukutyelelwa. IPalacio de La Moral, isakhiwo esihle esivela kwi-XNUMXth, XNUMXth kunye ne-XNUMXth century esiseCalle Olavarrieta yenye yazo. Enye, ikota yabalobi ICambaral,
Imvelaphi yeNuestra Señora la Blanca kunye Indawo yokukhanya yaseLuarca bakha ubugcisa bokwakha obuhle kakhulu. Ifunyenwe esiphelweni se-Atalaya promontory, inika umbono ongenakubethwa. Nangona sithetha ngeembono, kufuneka sichaze nezo zifunyenwe kwimvelaphi yeSan Roque, ebekwe endulini.
Enye into ekufuneka uyibonile eLuarca yiBosque Jardín de la Fonte Baixa, igadi yesibini yabucala yezityalo eSpain. Igadi yeAtlantic engaphezulu kwama-500 eehektare ezenziwe ngohambo, amachibi kunye nezikwere apho kunikezelwa khona kukhenketho.
Ngaba uyazi naziphi na ezi dolophu kunxweme lwase-Asturian?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Uhambo » Iidolophu zonxweme lwaseAsturiya ekufuneka uye kuzo
Ungayisebenzisa njani i-aloe vera
Ingozi yothando olugqithisileyo